Drafitra nataon'ny poeta TAN DA handany amin'ny fotoana TET miaraka amina piastre tsy manam-paharoa - Ny Tany Masina Fianarana Vietnam
Fanamarihana Literatiora Vietnam
Maro ny mpikaroka vahiny Fianarana Vietnamese mino ny fanoloran-tena fa ny fampiantsoana ny "tena azo itokisana" dia tokony ho natokana ho an'ny Tan Da [Tan đa] - a poeta ary ny manjaka, somary tany am-boalohany teo amin'ny tantaran'ny ankehitriny Literatiora Vietnam sy gazety. Ny dikan'ny hoe "eksistialisista"? - na misy mahatakatra an'io teny hoe tsara na diso io - miankina amin'ny fahalalana ho an'ny tena manokana. Amin'ity taona ity tet [Tetfotoana izao, afaka manana tadidintsika ny mitadidy hoevaky ny fiainana”Ilay poeta sy mpitati-baovao teo aloha tamin'izany andro masina ho an'ny firenentsika izany.
Izany no tet [Tet] fotoana ny taona Giap Tuat [Giáp Tuất] (1934 - Taonan'ny Alika) - Efa ho 70 taona lasa izay - Tamin'izany fotoana izany, poeta Tan Da [Tan đa] dia nanoratra ho an'ny Dong Phap [Đông PhápFotoana (Indochina frantsay) fananany Diep Van Ky [Diệp Văn Kỳ] any Saigon. Taorian'ny nandefasany ny lahatsoratra ho an'ny tet [Tet] olana, Tan Da [Tan đa] dia naloina karama iray volana, nefa vetivety dia nandany an'io vola rehetra io izy. Ka rehefa tet [Tetmanakaiky ny fotoana dia tsy nisy na iray aza nijanona teo ilay poeta, ary satria izy dia lehibemamo lava”, Dia ho sahirana izy noho ny tsy fisian'ny divay. manjaka Diep Van Ky [Diệp Văn Kỳ] nahatakatra ny fahasarotan'ny mpiara-miasa taminy, ka nomeny "fanomezana vaovao ho an'ny taom-baovao" izy 5 pastres.
Raha ny momba ny Dan bao [Dân báo] (Gazetin'ny olona) - Mpanoratra gazety Bui The My [Bùi Thế Mỹ] dia namoaka olan'ny lohataona faha-3 nifanarahana: tamin'ny 1940-1941-1942. Ankoatra ireo, ny gazetin'i Dang Ngoc Anh [Ọng Ngọc Anh] sy Mai Van Ninh [Mai Văn Ninh] dia namoaka olana 3 tao anatin'ny taona nifanesy 1943-1944 sy 1945.
Raha toa ka nipoitra ny fotoanan'ny krizy ara-toekarena ny "feo" ambany fanahy, dia rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny vanim-potoana tamin'ny vanim-potoana nisian'ny vanim-potoana, dia mbola nitory tamin'ny vahoaka ihany koa izany feo izany. Andao aloha hamaky lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny Dien Tin [Điện Tín] tamin'ny 1945.
“… Ny olona nialokaloka tao ambanin'ny hady kely ihany no nahafantatra ny halalin'ny tany; ary ireo izay efa lasa nankany an-dranomasina ihany no nahalala ny haben'ny ranomasina. Tao anatin'izay 6 taona lasa izay, ny firenentsika dia nitovy tamin'ny sambo iray niondrana an-dranomasina, raha mbola tany ambanivohitra kosa dia mbola misy hady kely hialofana.
Ny tsy fahalavorarian'ny olona dia misy fiheverana fa ny olona hafa dia voatahy kokoa noho izy ireo, raha ny tena izy, isan'andro dia mahazo fitahiana betsaka kokoa noho ny mpiara-belona aminy izy ireo. Na dia kely aza ny fitahiana azontsika, tokony hahatsapa ho faly isika manana azy io, satria isika irery no namorona azy io toy ny fialofana, na dia tery aza dia mbola manohitra ny tsindry ataon'ny rivotra, ary koa ireo sombin-baomba maranitra.
Na izany aza, misy fomba maro hifalifaliana, izay ahitantsika ny fanavahana sy ny mavitrika no tokony hoeritreretintsika rehefa miverina ny lohataona.
Mpampita vaovao maro tamin'izany fotoana izany no nanombatombana ny fihenan'ny votoatin'ny lohataona nandritra ireo dimy taona nahaterahana ireo.
Faly izy, avy hatrany dia nametraka ny volavolan-dalàna dimy piastre - tamin'izany fotoana izany dia vola be dia be - tao anaty poketrany, avy eo, dia nihazakazaka nankany amin'ny biraom-paty hividianana Delahaye tamin'ny alofany izy mba handehanana… lohataona. Tena hafahafa izany! Tamin'ity taona ity, namaky tampoka ny tenany ny "poakaty" vis-à-vis daholo ity poeta "adala" ity. Ary ity koa no fotoana voalohany teo amin'ny fiainany ilay poeta Tan Da [Tan đa] mipetraka amin'ny fomba voajanahary sy tsara tarehy amin'ny fiara "mendri-kaja", sahala amin'ny mpamboly mpanankarena. Ny fiara Delahaye tamin'ny voalohany dia nitondra azy tany amin'ny Paositra Post mba hividianana kitapo vola 3-piastre (amin'ny endrika karatra) izay nalefany ho an'ny sakaizany akaiky Ngo Tat To [Ngô Tất Tố] ao Hanoi [Hà Nội] - amin'ny fanomezana lohataona.
Tsy maintsy mampiasa iray amin'ireto piastres roa sisa izy mba handoa ny hofan-trano ka dia nijanona tao anaty poketrany ihany, ny piastre farany iray izay tsy maintsy ampiasaina amin'ny fandrakofana ny fandaniana mandritra ny 3 tet [Tet] andro.
◊ Loharano: HARENA NY kolontsaina VIETNAM Nandinika ny Dr. Hung Nguyen Manh [Nguyen Manh Hung].
(Visited 1,820 fotoana, 6 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← SORATIN’NY DOKUMENTS nosoratan’i A, B, C - Holylandvietnamstudies.com
TRADISIONAL LITERATURA sy ARIKA ARON'I VIETNAM - Fizarana 3 →
GOUJIAN: sabatra Sinoa fahiny izay manohitra ny fotoana (7,947)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (7,925)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (6,584)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (5,763)
Ny vondron'olona Vondron'olona 54 manana foko foko any Vietnam (5,421)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (5,344)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (4,754)
Comments Off momba ny kolontsaina sy ny ARTS ny fotoana - taonjato faha-15
Ny vondron'olona Vondrona ara-poko 54 ao Vietnam
Comments Off ao amin'ny GIAY Community of vondrona Ethnomaly miisa 54 any Vietnam
Fitsidihana anio: 276
Andro farany 7 nitsidika: 2,095
Total visits: 420,149